पायल्सको मुख्य कारण कब्जियत | Machhapuchhre News | माछापुच्छ्रे न्युज
पायल्सको मुख्य कारण कब्जियत
डा. विष्णु चापागाइँ
नेपालमा पछिल्लो समय पायल्स रोगबाट पीडित हुनेहरू बढिरहेका छन् । खानपिनको कारणले यो रोग लाग्ने गर्दछ । पायल्स भनेको दिसामा रगत जानु हो । जुन अवस्थामा दुख्ने भन्ने हुँदैन । दिसा गरिसकेपछि रगत जानुलाई हामी पायल्स भन्छौं । रगत जाँदा दुख्छ भने त्यो पायल्स होइन । दिसा गर्दा दुख्छ तर रगत जाँदा दुख्दैन । पायल्स थुप्रै कारणले गर्दा हुन्छ । मुख्य कारण कब्जियत हो । महिलाहरूलाई गर्भावस्थामा पनि पायल्स हुन्छ । गर्भावती भएको बेलामा नसाहरू थिचिन्छ जसले गर्दा कब्जियत हुन्छ । त्यसपछि मलद्वारको नसा फुटेर रगत पनि जान्छ ।
पायल्सको उपचारका लागि सबैभन्दा पहिला रोगको अवस्था हेर्नुपर्छ । पायल्स २ किसिमको हुन्छ । मलद्वारको भित्री भागमा भयो भने त्यसलाई इन्टरनल हेमोराइट्स भनिन्छ । बाहिरी भागमा नसा पलाएको छ भने त्यो एक्स्टर्नल हेमोराइट्स हो, जुन छालाले ढाकिएको हुन्छ ।
‘थर्ड र फोर्थ’ डिग्रीमा पुगेको छ भने अप्रेसन पनि गर्नु पर्ने हुन सक्छ ।
रगत गइरह्यो भयो भने ‘इमर्जेन्सी’ अप्रेसन गर्नुपर्छ । नशामा जाम भयो भने बिरामीलाई दुखाइ बढी हुन्छ, अप्रेसन नगरी हुन्न ।
पायल्सका लागि हामी पनि आयुर्वेदिक दबाइ सिफारिस गर्छौं । कब्जियत कसरी ठीक हुन्छ भनेर यो औषधि प्रयोग गरिन्छ । गाउँघरमा प्रयोग हुन इसबगोलले कब्जियत हुन दिँदैन । त्यो पद्दति जसले प्रयोग गरे पनि कब्जियत नै हटाउने हो । अप्रेसन गरे पनि पायल्स दोहोरिन सक्छ । अप्रेसन गर्दा जुन नसा सुन्निएको हुन्छ त्यसलाई बाँधेर निकाल्ने हो । तर कब्जियत भइरह्यो भने फेरि दोहोरिन सक्छ । ५÷६ वर्षसम्म हुँदैन तर खानामा ध्यान दिइएन भने फेरि दोहोरिन सक्छ । कतिपय अवस्थामा त दिसा नरोकिने समस्या पनि हुन सक्छ । थप जानकारीहरू
१. भोजन व्यवस्थाः पाइल्स भएकाहरूले तारे, भुटेको, अमिलो, पिरो, माछा, मासु, अण्डा, ध्यू, पनिर, मख्खन, र मैदाबाट बनेका वस्तुहरूको पहरेज गर्नुपर्दछ । नुन, खुर्सानी ज्यादा हालेको, बोटल तथा बट्टाबद्ध खाद्यान्नहरू जंगफूड तथा कार्बोनेटेड ड्रिंक्स (पेप्सी, कोक, मिरिन्डा) आदि अजिनामोटो र अन्य हानिकारक रसायनहरू हालेको खानेकुरा खानु हुँदैन् । चिया, कफी, इनर्जी ड्रिङ्क जस्ता उत्तेजक पेयको पनि परेज गर्नुपर्दछ ।
३. मौसम अनुसारको फलफूलहरू जस्तै ःमौसम, सुन्तला, नास्पाती, खरबुजा, काँक्रो, आँप, सरिफा, बेल, बेलौती, मेवा, अंगुरित, मुङ्ग–चना–मेथी र भिजाएको छोकडालाई ताजा दहीसँग मिसाएर खानाले कब्जीयत कम हुन गई पाइल्समा पनि फाइदा पु¥याउछ ।
व्यायम व्यवस्थापनः अंग व्यायम, रिढ व्यायम, सिथिलिकरण व्यायम, प्राप्त भ्रमण जस्ता हल्का व्यायम विधीहरू पाइल्सका लागि अत्यन्त आवश्यक व्यायमहरू हुन् । कब्ज हुन नदिनका लागि अग्निसार, कपालभाती, विपरितकरणी जस्ता क्रिया विधि पवनमुक्तासन, ताडासन, त्रियकताडासन, उतित्थपादासन, मान्डुकासन, ससकासन, भुजङ्कासन, सर्वाङ्गासन, बज्रासन, सुप्तबज्रासन, धनुरासन र सर्वासन जस्ता आसन विधि जालन्धर, उड्यान र मूलबन्ध जस्ता बन्ध विधि अश्वनी, ज्ञान र चिनमय जस्ता मुदा विधि सितली, सितकारी, भ्रमरी जस्ता स्वासन विधि एनिमा (बस्ती) लघु तथा गुरू शंख प्रक्षालन जस्ता सोधन विधिको नियमित अभ्यास गरिरहनु पर्दछ । पाइल्स भएको खण्डमा रक्तश्राव नरोकिउनजेल र घाँउ तथा पीडा कम नहुनजेल कुनै पनि योग विधि गर्नु हुँदैन । रक्तश्राव रोकिएपछि यथासम्भव यी विधिहरू अपनाउनु पर्ने हुन्छ ।
१. पाइल्स रोगलाई ठिक गर्नका लागि आद्राहरूमा कुपित भएर बसेको मललाई निकाल्न नितान्त आवश्यक छ । यसका लागि बिरामीलाई ३ देखि ७ दिनसम्मको थैरापिटिक उपवासमा राख्नुपर्दछ । उपवासका फलफूलको जुस, मह तथा कागती पानी आदि प्रशस्त दिनुपर्दछ । उपवास गरिसके पछि १०÷१५ दिनसम्म फलाहार वा साग सब्जी मात्र सेवन गराउनुपर्छ ।
८. भेस्लिनसँग कपुर मिलाएर मासुको गिर्खा गिर्खामा लगाए पनि यो रोगमा फाइदा पु¥याउँछ ।
२. दिनमा कमसेकम ३–४ लीटर पानी पिउने गर्दा खानामा मसिनो–मिठो भन्दा खस्स्रो–मोटो वस्तुहरूको समायोजन पाइल्सका लागि फाइदादायक छ । अतः रेसा र चोकर युक्त खाद्यपदार्थ सागसब्जी फलफूल, सलाद खाने बानी बसालौं ।
४. ज्यादा भारी वस्तु उठाउँदा सावधानी अपनाऔँ । विशेषतः भारी वस्तु उठाउँदा पेटमा बल पार्नुहँुदैन ।
ओम बैंकद्वारा स्मार्ट यात्रा कार्ड वितरण
माछापुच्छ्रे लाहाचोकमा लागुऔषध सम्बन्धी सचेतना